नेकपा भित्रको प्रचण्ड तरंगः ‘प्रचण्ड उन्माद प्रवृति’ नेतत्वमा पुगे नेकपालाई खतरा ! « News24 : Premium News Channel
नेकपा भित्रको प्रचण्ड तरंगः ‘प्रचण्ड उन्माद प्रवृति’ नेतत्वमा पुगे नेकपालाई खतरा !
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेपछि प्रचण्ड तरंग नै ल्याउने घटनाहरु नौलो होइन । खुला राजनीतिमा उदय भएपछि यस्ता धेरै फेहरिस्त छन् जुन धेरै पन्नाका किताब नै लेखिन सक्छ । पछिल्लो समय भेनेजुएला प्रकरणबाट प्रचण्ड प्रलाप यसरी तरंगित भयो त्यस्ले फेरि एकपटक प्रचण्डकै पेरिफेरिमा नेपालको राजनीति केन्द्रित हुन थालेको छ ।
‘बेला न कुबेला भेनेजुएला’ भए झै भएको छ अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई । अध्यक्ष प्रचण्डले बोलेपछि पार्टीले पनि बोल्नै प¥यो । त्यसपछि सरकारले पनि आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले बोलेपछि बोल्नै प¥यो भने झै उनैको सारशैलीमा आफ्नो विदेशी नीति प्रष्ट्यायो ।
तर नेपालको पुरानो मित्र मुलुक अमेरिकालाई यो पच्ने कुरै भएन । उसले आफ्नो असन्तुष्टि सतहमा प्रकट नगरेपनि भित्रभित्रै भुसको आगो बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्था छ । त्यसमाथि डाक्टर गोविन्द केसीको प्रकरण सेलाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले यसैलाई ‘मसला’ बनाउन थालेपछि सरकार आत्तिनु अस्वभाविक होइन पनि ।
नेकपा एकीकरणलाई अझै मुर्तरुप दिन नसकेको सत्तारुढ पार्टी भित्र अध्यक्ष दाहालको विज्ञप्तीले उत्पन्न तरंग त्यतिखेर उग्र रुप लियो जब पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्म ओलीले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई ‘टंग स्लीप’ अर्थात चिप्लिएको संज्ञा दिए । ओलीको यो भनाइ सार्वजनिक हुने वित्तिकै प्रचण्डको पारो १ सय ८० डिग्रीको शैलीमा तात्तिएको त्यतिखेर प्रष्ट भयो जव उनले सरकारको कार्यशैलीको चर्कोरुपमा विरोध गरे । प्रचण्डको आक्रोश यहीमा मात्र अडिएन अर्को माओवादी जन्माउने दुष्चेष्टा नगर्न सम्मको चेतावनी दिए ।
प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति पछि ओली निकट मानिएका मन्त्रीहरु भने प्रतिवाद उत्रिएका छन् । पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया अघि नबढ्दै नेकपाभित्रको नेताहरुबीचको तित्तताले धेरै शंका उत्पन्न गरेको निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका छन् ।
सरकारप्रति निकै नरम देखिने अध्यक्ष प्रचण्डको शुक्रबारको यो अभिव्यक्ति सहज देखिदैन । अर्का अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार संघीयता कमजोर पार्ने गरी अघि बढेको आरोपले दुई अध्यक्षबीचको तिक्तता भेनेजुएला प्रकरणपछिको निरन्तरताका रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको धारणापछि नेकपा नेताहरु विशेष गरेर ओली निकट पूर्व एमालेहरुले कडा प्रतिवादको संकेत दिएका छन् । ओली निकट मानिएका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘उन्माद’मा चल्नेलाई नेतृत्वमा ल्याए दुर्भाग्य हुने भनाई अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै प्रहार गरेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।
ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका भीम रावलले विगतमा कुनै देश विशेषको विषयकै कारण कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको रेखा कोरिएको प्रसंग उठाएका छन् । अर्कोतर्फ अध्यक्ष दाहाल निकट मानिएका पूर्व माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलको पार्टीभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एकमत नरहेको भनाईले अन्तरद्वन्द्वलाई बढावा दिएको छ भने कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले संघीयता सरकारले कमजोर पार्न खोजेको भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको आरोपलाई शनिबार विराटनगर पुगेर जवाफ दिएका छन् ।
गुट र उपगुटकै कारण विभाजन भोग्न बाध्य नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दाहाल अभिव्यक्ति र ओली पक्षधर नेताको प्रतिक्रिया सामान्य देखिदैन । एकताका धेरै विषय थाँती रहेका बेला के नेकपा विभाजनको पुरानो रोगबाट ग्रसित बन्ला ? प्रश्न सुरु भएको छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षधर नेता मानिएका योगेश भट्टराईले भने अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति सामान्य भएको बताउँछन् । यसले पार्टी एकतालाई खासै प्रभाव नपार्ने उनीहरुको तर्क छ ।
तर यता नेपाली काँग्रेसले भने नेकपा भित्र देखिएको तरंगलाई रोचकरुपमा नलिई गम्भीर रुपमा हेर्न थालेको छ । सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएको काँग्रेसले सडकमा सरकारविरुद्धको नारा प्रभावशाली बन्न थालेपछि कम्युनिष्ट सरकारले आन्दोलन सेलाउन चालेको चालकोरुपमा लिएको काँग्रेस नेताहरु बताउन थालेका छन् ।